Mma w’ani mmmere abɔnefo (1)
Nyansa na wɔde si fie (3)
Ɔtreneeni bɛhwe ase, nanso ɔbɛsɔre (16)
Mfa bɔne ntua bɔne ka (29)
Nkotɔ ne ohia na ɛnam (33, 34)
24 Mma w’ani mmmere abɔnefo,Na mma wo kɔn nnnɔ sɛ wo ne wɔn bɛbɔ.+ 2 Efisɛ wɔn koma dwen awudisɛm ho,Na wɔn ano keka mmusu. 3 Nyansa na wɔde si ofi,*+Na nhumu na ɛma egyina. 4 Nimdeɛ na wɔde nya nneɛma hyɛ emu adan ma,Nneɛma a ɛsom bo ne afɛfɛde nyinaa bi.+ 5 Onyansafo ho yɛ den,+Na nimdeɛ ma onipa ahoɔden dɔɔso. 6 Akwankyerɛ pa na wode bɛkɔ wo ko,+Na afotufo* dodow mu na nkonimdi wɔ.*+ 7 Ɔkwasea de, ne nsa ntumi nka nyansa;*+Onni hwee ka wɔ kurow pon ano. 8 Obiara a ɔbɔ pɔw bɔne no,Wɔbɛfrɛ no adwemmɔnefo hene.+ 9 Nkwaseadwene yɛ bɔne,Na nkurɔfo kyi ɔfɛwdifo.+ 10 Sɛ w’aba mu bu amanehunu da* mu a,W’ahoɔden bɛyɛ ketewaa bi. 11 Gye wɔn a wɔde wɔn rekɔ owu mu,Na gye wɔn a wɔrehinhim wɔ okum kwan so no.+ 12 Sɛ woka sɛ: “O, na yennim” a, Nea Ɔhwehwɛ koma mu* no renhu anaa?+ Yiw, Nea n’ani hwɛ wo* no behu,Na obetua onipa biara ka sɛnea ne nnwuma te.+ 13 Me ba, di ɛwo, efisɛ eye;Ɛwo a efi ɛwokyɛm mu yɛ dɛ paa. 14 Saa ara na nyansa te; hu sɛ eye ma wo.*+ Sɛ wunya bi a, ebesi wo yiye daakye,Na wɔrentwa w’anidaso nkyene.+ 15 Nyɛ wo ho sɛ ɔbɔnefo nkɔtɛw baabi a ɛbɛn ɔtreneeni fi;Nsɛe baabi a ogye n’ahome. 16 Sɛ ɔtreneeni hwe ase mpɛn ason mpo a, ɔbɛsan asɔre;+Na abɔnefo de, mmusu bɛma wɔahwe ase.+ 17 Sɛ wo tamfo hwe ase a, nni ahurusi,Na sɛ biribi to no hintidua a, mma wo koma ani nnnye.+ 18 Anyɛ saa a, Yehowa behu, na n’ani rennye ho,Na Ɔbɛdan n’abufuw afi no* so.+ 19 Mma wo bo mmfuw* esiane abɔnefo nti,Na mma w’ani mmmere nnipa bɔnefo. 20 Efisɛ anidaso biara nni hɔ mma ɔbɔnefo biara;+Na wobedum abɔnefo kanea.+ 21 Me ba, suro Yehowa ne ɔhene,+ Na wo ne atuatewfo* mmmɔ,+ 22 Efisɛ wɔn amanehunu bɛba prɛko pɛ.+ Hena na onim ɔsɛe a wɔn baanu* de bɛba wɔn so?+ 23 Saa nsɛm yi nso yɛ anyansafo dea: Atemmu mu animhwɛ de, enye.+ 24 Obiara a ɔka kyerɛ ɔbɔnefo sɛ: “Woyɛ ɔtreneeni” no,+ Aman bɛdome no, na amanaman bebu no obusuyɛfo. 25 Na wɔn a wɔkasa kyerɛ no de, ebesi wɔn yiye;+Wɔde nneɛma pa behyira wɔn.+ 26 Nea ɔma mmuae a ɛyɛ nokware no, nkurɔfo befew n’ano.*+ 27 Yɛ w’abɔnten adwuma wie, na toto biribiara kama wɔ w’afuw mu;Wuwie a, na woasi wo fi.* 28 Nni adanse ntia wo yɔnko bere a wunni nnyinaso biara.+ Mfa w’ano nnaadaa nkurɔfo.+ 29 Nka sɛ: “Nea wayɛ me no, saa ara na me nso mɛyɛ no;Nea ɔyɛɛ me no, mɛyɛ no bi atua ka.”+ 30 Mitwaam wɔ ɔkwadwofo afuw ho,+Na mekɔfaa ɔbarima a wagyimi* bobefuw* ho. 31 Mihui sɛ nwura agye afa;Nsasono afa ase nyinaa,Na abo a wɔde agye ho ban no abubu.+ 32 Mehwɛe, na midwen ho wɔ me komam;Mihui, na nea misuae ni:* 33 Mereda kakra, meretɔ nko kakra,Merebobɔw me nsa ahome kakra; 34 Wode saa ara na wo hia aba sɛ ɔkorɔmfo,Na w’ahokyere aba sɛ ɔkorɔmfo werɛmfo.+
^ Anaa “wɔde kyekyere abusua.”
^ Anaa “nkwagye wɔ; nneɛma kɔ yiye.”
^ Anaa “ɔhaw bere.”
^ Anaa “Ɔhwehwɛ adwene a onipa de yɛ biribi mu.”
^ Anaa “ɛyɛ dɛ ma wo kra.”
^ Kyerɛ sɛ, ɔtamfo no.
^ Anaa “Mma wo bo mmfuw denneennen.”
^ Anaa “wɔn a wɔpere hwehwɛ nsakrae.”
^ Kyerɛ sɛ, Yehowa ne ɔhene.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Mmuae tẽẽ te sɛ mfewano.”
^ Anaa “woakyekye w’abusua.”
^ Nt., “mefaa mu adwene.”